မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့သူတစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် နာမည်ပေါက်နေတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျက်ပြယ်သွားပါသလား။ ကျန်ရစ်တဲ့ သားသမီးတွေက အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိပါ သလား? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့သူတစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် နာမည်ပေါက်နေတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျက်ပြယ်သွားပါသလား။ ကျန်ရစ်တဲ့ သားသမီးတွေက အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိပါ သလား?
9 Jan 2020 1:19 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
478 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စမှာဗဟိုကော်မတီက ခွင့်ပြုချက်ချပေးလိုက်တယ်။ ခွင့်ပြုချက် ချပေးလိုက်တဲ့မြေတွေနဲ့ပက်သက်ရင် စည်းကမ်းချက်တွေ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲနဲ့ လုပ်ပိုင် ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က အခြားသူကို လွှဲပြောင်း ရောင်းချခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်းတေ မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ စကားရပ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ စကားရပ်အဓိပ္ပာယ်အရဆိုရင် အမွေဆက်ခံခွင့်က မပါပါဘူး။ မပါပေမယ့် ဒီလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးက ဆုံးရှုံးသွားသလားဆိုရင် မဆုံးရှုံးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လယ်ယာ မြေဥပဒေမှာက ဘာထုတ်ပြန်ထားသလဲဆိုတော့ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ အညီ လုပ်ကိုင်ပြီးရင် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီး ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဥပမာ- သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၄ နှစ် ကာလလုပ်းပြီးပြီး သီးနှံတွေကလည်း အခြေတကျဖြစ်သွား ပြီဆိုရင် မိမိရဲ့ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုပြီး ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ လျှောက်လွှာတင်လို့ရပါတယ်။ လက်ရှိစိုက်ပျိုးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေ၊ အထောက်အထားတွေနဲ့ တိုင်းလုပ်ငန်း အထောက်အကူအပြုအဖွဲ့ရဲ့ ထောက်ခံချက်တွေနဲ့ ဗဟိုလယ်/စီကို လျှောက်ရင် ဗဟိုလယ်/စီက လုပ်ပိုင် ခွင့်ပြောင်းပေးပါတယ်။ အရင်တုန်းက မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရမယ်၊ အခုပုံစံ( ၇ )ရမယ်၊ ပုံစံ( ၇ ) ရရင် ဘာရမလဲဆိုတော့ ပုံစံ ( ၇ ) သည် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ဖြစ်သည့်အတွက် လယ်ယာမြေကို အမွေဆက်ခံခွင့်၊ ရောင်းပိုင်ခွင့်၊ လွှဲပိုင်ခွင့်၊ ခွဲစိတ်ပိုင်းခွင့်တွေ ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက် အမွေဆက်ခံခွင့်၊ ရောင်းချ ခွင့်ရှိပါတယ်။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများသီးခြားကိုတော့ အမွေဆက်ခံခွင့်၊ လွှဲပြောင်းလို့မရပါဘူး။
မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲဟာကို လယ်ယာမြေအဖြစ် ပြောင်းခွင့်ပေးတဲ့ အတွက် လယ်ယာမြေအဖြစ် ပြောင်းပြီးရင်တော့ သားသမီးများ၊ ဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူများ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်တော့ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်သည် အမွေဆက်ခံခွင့်၊ သားသမီး တွေ ဆက်လက်ပိုင်ခွင့်ကိုတော့ မပေးထားပါဘူး။
မွလှေတျ၊ မွလေပျ၊ မွရေိုငျးစီမံခနျ့ခှဲမှုကိစ်စမှာဗဟိုကျောမတီက ခှငျ့ပွုခကျြခပြေးလိုကျတယျ။ ခှငျ့ပွုခကျြ ခပြေးလိုကျတဲ့မွတှေနေဲ့ပကျသကျရငျ စညျးကမျးခကျြတှေ သတျမှတျပေးထားပါတယျ။ နိုငျငံတျောရဲ့ခှငျ့ပွုခကျြ မရရှိဘဲနဲ့ လုပျပိုငျ ခှငျ့ရရှိခဲ့တဲ့ပုဂ်ဂိုလျက အခွားသူကို လှဲပွောငျး ရောငျးခခြွငျး၊ ခှဲစိတျခွငျး၊ ပေးကမျးခွငျးတေ မလုပျရဘူးဆိုတဲ့ စကားရပျတှပေါဝငျပါတယျ။ အဲဒီ စကားရပျအဓိပ်ပာယျအရဆိုရငျ အမှဆေကျခံခှငျ့က မပါပါဘူး။ မပါပမေယျ့ ဒီလူတှရေဲ့အခှငျ့အရေးက ဆုံးရှုံးသှားသလားဆိုရငျ မဆုံးရှုံးပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လယျယာ မွဥေပဒမှောက ဘာထုတျပွနျထားသလဲဆိုတော့ မွလှေတျ၊ မွလေပျ၊ မွရေိုငျးမြား သတျမှတျထားတဲ့ စညျးကမျးနဲ့ အညီ လုပျကိုငျပွီးရငျ လယျယာမွလေုပျပိုငျခှငျ့ကို ပွောငျးလို့ရတယျဆိုပွီး ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ ဥပမာ- သတျမှတျထားတဲ့ ၄ နှဈ ကာလလုပျးပွီးပွီး သီးနှံတှကေလညျး အခွတေကဖြွဈသှား ပွီဆိုရငျ မိမိရဲ့ မွလှေတျ၊ မွလေပျ၊ မွရေိုငျးလုပျပိုငျခှငျ့ကို လယျယာမွလေုပျပိုငျခှငျ့ဆိုပွီး ပွောငျးလို့ရပါတယျ။ လြှောကျလှာတငျလို့ရပါတယျ။ လကျရှိစိုကျပြိုးထားတဲ့မှတျတမျးတှေ၊ အထောကျအထားတှနေဲ့ တိုငျးလုပျငနျး အထောကျအကူအပွုအဖှဲ့ရဲ့ ထောကျခံခကျြတှနေဲ့ ဗဟိုလယျ/စီကို လြှောကျရငျ ဗဟိုလယျ/စီက လုပျပိုငျ ခှငျ့ပွောငျးပေးပါတယျ။ အရငျတုနျးက မွလှေတျ၊ မွလေပျ၊ မွရေိုငျးလုပျပိုငျခှငျ့ရမယျ၊ အခုပုံစံ( ၇ )ရမယျ၊ ပုံစံ( ၇ ) ရရငျ ဘာရမလဲဆိုတော့ ပုံစံ ( ၇ ) သညျ လယျယာမွလေုပျပိုငျခှငျ့လကျမှတျဖွဈသညျ့အတှကျ လယျယာမွကေို အမှဆေကျခံခှငျ့၊ ရောငျးပိုငျခှငျ့၊ လှဲပိုငျခှငျ့၊ ခှဲစိတျပိုငျးခှငျ့တှေ ခှငျ့ပွုထားတဲ့အတှကျ အမှဆေကျခံခှငျ့၊ ရောငျးခြ ခှငျ့ရှိပါတယျ။ မွလှေတျ၊ မွလေပျ၊ မွရေိုငျးမြားသီးခွားကိုတော့ အမှဆေကျခံခှငျ့၊ လှဲပွောငျးလို့မရပါဘူး။
မွလှေတျ၊ မွလေပျ၊ မွရေိုငျးမြား လုပျပိုငျခှငျ့ရထားတဲဟာကို လယျယာမွအေဖွဈ ပွောငျးခှငျ့ပေးတဲ့ အတှကျ လယျယာမွအေဖွဈ ပွောငျးပွီးရငျတော့ သားသမီးမြား၊ ဆကျခံပိုငျခှငျ့ရှိသူမြား လုပျပိုငျခှငျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ သာမနျအားဖွငျ့တော့ မွလှေတျ၊ မွလေပျ၊ မွရေိုငျးမြားလုပျပိုငျခှငျ့သညျ အမှဆေကျခံခှငျ့၊ သားသမီး တှေ ဆကျလကျပိုငျခှငျ့ကိုတော့ မပေးထားပါဘူး။
ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း
Mini condo ဌားမညျ။
Pile Foundation နဲ့ နေနန်းသုခ construction company က ဆောက်ထားတဲ...